Momba anay - Dalian River Lake Fishing Tackle Co., Ltd.
Chongqing Dahan Traffic Facilities Co., Ltd.We dia mpanamboatra tobim-pitaterana matihanina manampahaizana manokana amin'ny fampandrosoana, ny famokarana ary ny fanondranana ny loko mafana miempo hoso-doko sy ny fitaovana fitaterana. , gazy karbonika titane, resin-tsolika C5 / C9 sy ny sisa.Ny vokatra fototra rehetra dia nandalo ny fitsapana nataon'ny Minisiteran'ny Serasera.Ny orinasanay dia manana rafitra fitantanana mahomby sy fitaovana famokarana mandroso.
Ny ekipa R&D matanjaka anay, ny kalitaon'ny vokatra tsara, ny serivisy aorian'ny varotra ary ny vidiny mifaninana dia nahazo fahatokisana avo lenta avy amin'ny mpanjifanay ao an-trano sy any ivelany.Amin'izao fotoana izao, ny vokatra dia efa namidy tany Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Azia Afovoany, Afrika, Amerika Atsimo sy ny firenena hafa sy ny faritra.
Tsy mamatsy vokatra fotsiny izahay, fa manome tolotra ara-teknika sy vahaolana amin’ny tetikasa fanamboaran-dalana isan-karazany, toy ny fanamboarana ny lalana.Ny ekipa mpanao marika lalana dia manana traikefa amin'ny fanamboarana marika an'hetsiny kilaometatra any Shina mba hanampiana ny mpanjifa amin'ny famahana olana sarotra amin'ny fanamboaran-dalana.
Ny fitsipiky ny serivisy Dahan Transportation: Raha mila izany ianao dia tsy maintsy mamaly.